Indlela yokusebenzisa i-intanethi njengesixhobo sokuBika
Yenza uphando lulula, kodwa kufuneka ukwazi ukuwusebenzisa ngokufanelekileyo
Esemngciphekweni wokulila njengombala omdala, makhe ndixelele ukuba kwakunjani ukuba intatheli ezinsukwini ngaphambi kokuba "ukuhamba" kwakuyisenzi.
Ngaloo ndlela, abavakalisi bekulindeleke ukuba bafumane imithombo yabo kwaye baxoxe nabo , nokuba ngumntu okanye phezu kwefowuni (khumbula, phambi kwe-intanethi, asizange sibe ne-imeyile). Kwaye ukuba ufuna imbali yenkcazelo ibali, uhlolisise iphephandaba, apho izicatshulwa kwimicimbi yangaphambili zigcinwe ekufakeni iibhabhinethi.
Okanye ubuze izinto ezifana ne-encyclopedias.
Namhlanje, ewe, yile yonke imbali yamandulo. Ngokuchofoza kwintonga okanye kumpompo kwi-smartphone, intatheli zifikelela kwimali engenamkhawulo yolwazi kwi-intanethi. Kodwa into engaqhelekanga kukuba abaninzi beendaba abazifunayo kwiinklasi zamabonakalisi abonakala bengakwazi ukusebenzisa ngokufanelekileyo i-intanethi njengethuluzi lokunika ingxelo. Nazi ezi zintathu iingxaki ezibalulekileyo endazibona:
Ukuxhomekeka kakhulu kwizinto ezivela kwiWebhu
Le nto mhlawumbi iyona nto ixhaphakileyo ingxelo ye-Intanethi endiyibonayo. Ndifuna abafundi kwiikhosi zam zorhwebo ukuba bavelise amanqaku angamazwi angama-500, kwaye nganye i-semester yabambalwa ithumela amabali avuselela ulwazi kwiiwebhusayithi ezahlukeneyo.
Kodwa kukho ubuncinane ezimbini iingxaki ezivela kulo. Okokuqala, awukwenzi naluphi na ingxelo yakho yangaphambili, ngoko ke awufumani uqeqesho olubalulekileyo ekuqhubeni i-interviews .
Okwesibini, ubeka umngcipheko wokwenza ulwaphulo-mthetho , isono esiphezulu kwi-journalism.
Iinkcukacha ezithathwe kwi-intanethi kufuneka zibe yinkxaso, kodwa ingenayo indawo, ingxelo yakho yokuqala. Naliphi na ixesha umlobi wezithuba zengxelo yomfundi ubeka umgca wakhe kwinqaku engeniswe kwiprofesa okanye iphephandaba labafundi, ukucinga ukuba ibali lisekelwe kakhulu emsebenzini wakhe.
Ngokutshintsha into ethile ekhutshwe ngokubanzi kwi-intanethi okanye ingabonakali ngokufanelekileyo, uyaziqhelanisa nezifundo ezibalulekileyo kwaye ubeka umngcipheko wokufumana i- "F" yokwenza utywala.
Ukusebenzisa iInternet Too Little
Emva koko kukho abafundi abanenkinga echaseneyo - abahluleka ukusebenzisa i-intanethi xa kunokubonelela ngolwazi olusemgangathweni oluluncedo kumabali abo.
Masithi intatheli yomfundi wenza inqaku malunga nendlela ukunyuka kwamaxabiso egesi kuthintela abaqhubi kwiikholeji. Udliwano-ndlebe nabafundi abaninzi, ukufumana ulwazi oluninzi malunga nokuba ixabiso liye lachaphazela njani.
Kodwa ibali enjengale liphinde likhale ngenxa yenkcazelo kunye nemvelaphi. Ngokomzekelo, kwenzekani kwiimarike zeoli zehlabathi ezibangele ukwanda kwexabiso? Yiyiphi intengo yexabiso legesi kulo lonke ilizwe okanye kwilizwe lakho? Lelo hlobo lwazi olunokufumaneka lula kwi-intanethi kwaye luyafaneleka ngokufanelekileyo ukusebenzisa. Kuyadumisa ukuba lo mphathiswa uthembela kakhulu kwiintliwano-ndlebe zakhe, kodwa uguqulwa ngokufutshane ngokungaziboni ulwazi oluvela kwiwebhu elungenza ukuba iinqununu zenzeke ngokubanzi.
Ukungaphumeleli ngokufanelekileyo Ukunikezela ngeenkcukacha ezithathwe kwiWebhu
Ingaba usebenzisa imithombo ye-intanethi eninzi okanye encinane, kubalulekile ukuba uhlale ubeka ngokufanelekileyo ulwazi olusebenzisa kuyo nayiphi na iwebhusayithi.
Naliphi na idatha, iinkcukacha, imvelaphi yolwazi okanye iingcaphuno ongazange uzibuthele zona kufuneka zithathwe kwiwebhusayithi evela kuyo.
Ngethamsanqa, akukho nto iyanzima malunga nesigqibo esifanelekileyo. Ngokomzekelo, ukuba usebenzisa ezinye iinkcukacha ezithathwe kwi -New York Times , bhala nje into enje, "ngokutsho kweNew York Times," okanye "I-New York Times ibike ..."
Oku kungenisa enye imbambano: Yiziphi iiwebhsayithi ezinokuthenjelwa ngokwaneleyo ukuba intatheli isebenzise, ​​kwaye yiziphi iisayithi okufanele zicace? Ngethamsanqa, ndibhale inqaku kweso sihloko, ongayifumana apha .
Ukuziphatha kweli bali? Ubuninzi beli nqaku oyenzayo kufuneka lusekelwe kwingxelo yakho kwaye uxoxwe nodliwano-ndlebe. Kodwa naliphi na ixesha wenza ibali elinga phuculiswa ngolwazi lwangemva kwiwebhu, ngoko ke, ngeendlela zonke, sebenzisa ulwazi olunjalo.
Qinisekisa ukuba uyayifaka ngokufanelekileyo.
Ngaba iAfrika iphezulu?
Iingoma zeBeatles: "Ithikithi Ukuhamba"
Iilwimi zesiLatini: Umntu wabo kunye nenani
Ukubhukuda ukuSebenza ukuze uqalise ukuthambisa
Amagunya eKholeji achazwe: AH
Imfazwe yaseKorea: USS Lake Champlain (iCV-39)
Ukukhishwa kweeKarimesi zeeKharimesi, iiChords, iThabhu, iShidi loMculo kunye neNgoma
Yintoni Eyenza Umntwana Omkhulu Oyingane '?
Ukunyuka kweeNtlanzi zoKhenketho kunye neLast
I-Perl Array ye-chop () kunye ne-chomp () Umsebenzi - I-Quick Tutorial
10 Abaxhamli bebukele ngo-2016